Ogaaw sababta Farey, Kullane iyo Shub u dhaaran diideen | KEYDMEDIA ENGLISH
Ogaaw sababta Farey, Kullane iyo Shub u dhaaran diideen
Waxaa xilkii uu yahay waayay Taliyaha Qaybta 60-aad ee Ciidanka Xoogga Dalka, General Maxamed Sheekh Cabdullaahi (Ciiro), kaas oo ka howl-galayay gobollada Bay iyo Bakool.
MUQDISHO, Soomaaliya – Taliyaha ku meel gaarka ah ee NISA, Yaasiin Farey, Taliyaha Ciidanka Asluubta Mahad Cabdiraxmaan Aadan iyo Kullane Jiis oo NISA u qaabilsan Sirdoonka & Amniga, ayaa ka baaqsaday dhaarintii Xildhibaannada shalay, sababo la xariira in ay xilalka sii ilaashadaan.
Sida Dastuurku qabo, marka Xildhibaanku dhaarto, wuxuu luminayaa xilka uu hore u haayay, marka laga reebo Wasiirrada, waana sababta saraakiishan, ku diideen in ay dhaartaan, waxayna doonayaan in ay xilalka sii hayaan inta Farmaajo, ka diyaarsanayo shaqsiyaad uu ku baddalo.
Yaasiin Farey, wuxuu xilka ku yimid wada xaajood dhex maray Farmaajo iyo Rooble, waxaana adkaan doonta in Agaasimaha NISA, Farmaajo magacaabo la tashi la’aan xilli lagu jiro marxadda doorashada, halka Kullane Jiis ay kooxda waqtigu ka dhamaaday u arkaan in kaalintiisa jaajuusnimo muhiim u tahay.
Dhaarta kadib, shalay waxaa xilal ay hayeen lumiyay, Xildhibaan Maxamed Abuukar Jacfar oo hayay xilka Guddoomiyaha degmada Dayniile, Faarax Cabdi Diini, Gudoomiye ku xigeenka howlwha guud ee gobolka Banaadir iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cagaweyne, Maareeye ku xigeenka Dekadda Muqdisho.
Sidoo kale, waxaa xilkii uu yahay waayay Taliyaha Qaybta 60-aad ee Ciidanka Xoogga Dalka, General Maxamed Sheekh Cabdullaahi (Ciiro), kaas oo ka howl-galayay gobollada Bay iyo Bakool, halka ku dhawaad 30 Xildhibaan lumiyeen xilal ay ka hayeen maamul gobolleedyada iyo hay’adda NISA.
Guddoomiyayaasha Ku meel gaarka ah ee Golayaasha Baarlamaanka, Sen.Maxamed Cali Gaagaab iyo Xil.Cabdisalaan Xaaji Dhabancad, waxa ay sheegeen, in sabtiga berri ah ay fariisan doonaan Baarlamaanka si waqti uusan u lumen, taasoo ka dhigan in sarkiisha gadaal isku dhigeysa qasbanaan doonaan.
Yaasiin Farey iyo Mahad Cabdiraxmaan [Taliye Shub], waa qaateen shahaadad, hayeeshee, ma aysan dhaaran, halka Kullane Jiis, safar ugu maqan yahay gobolka Gedo, halkaasoo uu ka abaabulayo xiisado hor leh, xilli Garbahaarrey laga wareejiyay degaan doorashada 2-aad ee maamulka Jubbaland.